तयार भयो मंगलग्रहमा मान्छे लैजाने संसारकै शक्तिशाली रकेट, यस्तो छ भित्री बनावट (फोटोफिचर) – पुरा पढ्नुहोस्……
तयार भयो मंगलग्रहमा मान्छे लैजाने संसारकै शक्तिशाली रकेट, यस्तो छ भित्री बनावट (फोटोफिचर)
एजेन्सी। अमेरिकी अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था नासाले संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली रकेट ‘स्पेस लन्च सिस्टम’ निर्माणको काम पूरा गरेको छ । नासाका अनुसार यो रकेटको इन्जिन ‘आरएस २५’ को परीक्षण सफल भएको छ । यसका साथै रकेटले पनि आकार लिएको छ । अब कुनै अप्रत्याशित घटना नभइ काम सुचारु रहेमा अर्को वर्ष यो रकेट आफ्नो मिशनमा मंगल ग्रहमा जानेछ ।
पहिलो पटकमा भने यो रकेटमा मान्छे पठाइने छैन । पहिलो वर्ष यो रकेटको तौल र लागत कम गर्नको लागि काम हुनेछ । यही रकेटमा सन् २०३० सम्ममा मंगल ग्रहमा मान्छे पठाउने नासाको तयारी छ । यो रकेटमा प्रयोग गरिएको इन्जिन २०१३ मा भएको अर्को मिसनमा पनि प्रयोग भएको थियो । अहिले यो इन्जिन बनाउनको लागि झण्डै ६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको लागत परेको छ । भविष्यमा यसको लागत ३३ प्रतिशतसम्म कम गर्न सकिने नासाले अनुमान गरेको छ ।
यो रकेट ७७ टन भार बोकेर उडान भर्न सक्षम छ । सामान्यतया नासाका रकेटहरु ५० टन भारवहन क्षमताका हुन्छन् । आरएस २५ को तौल ४ टन, लम्बाइ १४ मिटर र चौडाइ ८ मिटर छ । यो इन्जिनको तापक्रम फरक फरक परिस्थितिमा माइनस ४२३ डिग्री फरेनहाइटदेखि ६ हजार डिग्री फरेनहाइटसम्म हुन सक्छ । यो इन्जिनको डिजाइन क्यालिफोर्नियामा गरिएको हो र परीक्षण मिसिसिपीमा गरिएको हो ।
यो इन्जिनमाट निस्कने ग्यास (जेट स्टिम)को रफ्तार आवाजको गतिभन्दा १३ गुणा बढी छ । यो जेनस्टिमले ५ हजार किलोमिटरको दूरी १५–२० मिनेटमै पार गर्न सक्छ । इन्जिनमा हाइड्रोजन फ्युल ट्यांक लगाइएको छ । यो ट्यांक १३० फिट लामो छ । यसको क्षमता झण्डै ५० लाख लिटर चिसो तरल हाइड्रोजन भण्डार गर्न सक्ने छ ।
हेर्नुहोस फोटो फिचर
केटीएम नेपाल बाट साभार |
Posted in अन्तर्राष्ट्रिय समाचार, बिज्ञान प्रबिधि
Prevनेपाल एयरलाइन्सको नयाँ कार्यालय दुबईको सलाउदिनमा उद्घाटन , भाडादरकति ? अनि लगेज कति किलो लान पाइन्छ त ? पुरा जानकारी सहित
Nextफेसबुकमा फोटो अपलोड गर्दै हुनुन्छ ? यी चार कुरा अवश्य प्रयोग गर्नु होला !
यसरी बन्न स’क्छ नेपाल वि’श्वमै धनी मुलुक-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
नेपाल टेलिकमसँग मुद्धा जितेका अपिल त्रिपाठी : वकिलसँगै के भन्छन् अपिलको मुद्धा लड्ने वकिल ?-हेर्नुहोस (पुरा भिडियो)
आज ह्वात्तै घट्यो सुनको भाऊ, कति छ त ? हेर्नुहोस आजको मूल्य ।